के कानुनी भांग लागि नयाँ व्यवसाय खाता गर्छ?
समाचार र चलन / सन
सन legalizing द्वारा, खेत बिल सीबीडी को कानूनी स्रोत सिर्जना गरेको छ.
छवि क्रेडिट: anatoliy Sizov | गेट्टी तस्बिरहरू
सरल खोज. गुणस्तर भेट्टाउनेछन्. को भांग समुदाय लागि आफ्नो साझेदार र डिजिटल पोर्टल.
10 जनवरी 20194थप पढ्नुहोस्
राय हरियो उद्यमी- कर्मचारी आफूलाई छन्.
कृषि बिल, डिसेम्बर मा हस्ताक्षर 2018, maakt de weg vrij voor CBD-producten om legaal te worden in het hele land – althans, कि गाँजा उद्योग देखि वकील को आशा छ.
स्थिति कसरी प्रकट गर्ने हो भने, अमेरिका गाँजा legalizing थाले पछि यो निलम्बित सीबीडी उत्पादनहरु जारी छ कि अस्पष्टता हटाउन हुनेछ, कोलोराडो मा सुरु 2014. त्यो हो संघीय सरकार अझै पनि अवैध रूपमा गाँजा सूचीबद्ध किनभने तालिका म- को नियन्त्रण पदार्थ ऐन मा दबाइ, कोकीन र लागु पदार्थ बाहेक.
कृषि बिल मा सन legalizing द्वारा, अमेरिकी कांग्रेस र राष्ट्रपति सीबीडी उत्पादनहरु लागि ढोका खुलेको, जो भांग देखि व्युत्पन्न छन्. यो धेरै गर्न निर्णय के भन्छ निर्भर.
तर सम्भावित अवस्थित. Colleen Keahey, को गांजा उद्योग संघ को अध्यक्ष, भन्नुभयो उपभोक्ता रिपोर्टहरू अमेरिकामा सन legalizing मतलब सक्ने यो एक दोहरीकरण प्रतिनिधित्व वा एक वर्ष भित्र घरेलू उत्पादन को tripling कि.
सम्बन्धित: वरिष्ठ को भांग बजार केहि कम्पनीहरु ध्यान हुनुहुन्छ
के सीबीडी उत्पादनहरु?
Op dit punt zou de vraag kunnen zijn “wat zijn geen CBD-producten?” CBD, जो cannabidiol लागि खडा छ, gummies पहिले नै व्यवस्थित भइरहेको छ, क्यान्डी, चकलेट, कफी, पानी, पाल्तु जनावर खाना, रेस्टुरेन्ट मा SPECIALE मेनु-वस्तु, लोशन, तेल, badkuipen – de lijst gaat maar door.
किन लोकप्रियता? सीबीडी देखि टाउको दुखाइ गर्न पाइएको छ, myalgia, अवधि ऐंठन, पुरानो दुखाइ, फिक्री र पनि निराशा राहत. खेलाडीहरूलाई अघि र प्रशिक्षण पछि दुवै यसको प्रयोगमा अँगालेका छन्.
सीबीडी पनि Epidiolex मा एक संघटक छ, मान्छे मिर्गी को सबै भन्दा गंभीर प्रकारका दुई भोगिरहेका लागि दौरा शामिल उपचार गर्न संघीय खाद्य र औषधि प्रशासन द्वारा यस वर्ष स्वीकृत. यो भांग को एक व्युत्पन्न संग एफडीए द्वारा अनुमोदित पहिलो दबाइ छ र एक संकेत औषधि प्रवर्तन एजेन्सी फेरबदल, सीबीडी को दबाइ प्रयोग मामलामा कम से कम, यस एफडीए.
Belangrijk is dat CBD de chemische stof in marihuana is die niet het “hoge gevoel” veroorzaakt (कि THC). यो फारम बिल विचार आउँदा यो एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ.
सम्बन्धित: संघीय CANNABIS निषेधाज्ञा मा धेरै कमजोर थियो 2018
सन कानुनी बनेको छ
प्रबन्ध लागि रिपब्लिकन बहुमत नेता मिच McConnell दिनुभयो सीनेट द्वारा खेत बिल पारित गरेर घरेलू सन कानुनी थियो. यसलाई मद्दत गर्छ कि केंटकी को आफ्नो घर राज्य 2017 एक्लै 16 McConnell द्वारा समर्थित थियो जो लाख डलर सन staatspilpprogramma अन्तर्गत बेचिएको.
डी अध्यक्ष हस्ताक्षर पनि बिल केंटकी मा cultured जो सन बनेको एक कलम McConnell प्रदान संग.
को नियन्त्रित पदार्थ को भाषा सन हटाउन संशोधन ऐन
जस्तै अवलोकन रोलिंग स्टोन मा, को यूएसडीए राज्य योजना समीक्षा गर्नेछ कसरी र यो कि केही अनिश्चितता ठूलो अवरोध हुन सक्छ भनेर देखाउँछ. यदि यसो भन्छ योजना पेश छैन, व्यक्तिगत उत्पादकहरु सीधा संघीय सरकारलाई एक योजना पेश गर्ने अधिकार छ.
परिवर्तनको महत्त्व को एक साइन इन, चार्लोट वेब कोलोराडो आधारित नाम कम्पनी को लागि मुख्य विकास अधिकारी रूपमा Eugenio Mendez. चार्लोट वेब सीबीडी-infused कल्याण उत्पादनहरु मा विशेष छ, पेय सहित. Mendez पूर्व पानी को लागि वैश्विक मार्केटिङ को उपाध्यक्ष थियो, सुधारिएको पानी- र खेल कोका-कोला मा पेय.
dispensaries.com मा पालना म nstagram बारेमा मा उचाइ नवीनतम भांग समाचार बस्नुहुन्थ्यो.